Ebee ka a hụrụ Iguazu Falls kacha mma: na Brazil ma ọ bụ Argentina? | Akụkọ Njem
Ogige Ntụrụndụ Iguazú bụ otu n’ime ihe ịtụnanya okike anyị nwere ike ịchọta na Latin America. Nke mere na UNESCO matara na 1986 dị ka Uru Kachasị Eluigwe na Ala na otu n'ime ihe ịtụnanya asaa nke ụwa.
Ihe dị iche iche ọ bụghị naanị bụ n'eziokwu na ihe karịrị ụdị anụmanụ 480 na ihe karịrị ụdị ahịhịa 2000 bi na ya, kamakwa na ọ bụ ebe obibi maka ihe atụ dị ukwuu nke Paranaense Forest (akụkụ nke oke ohia Atlantic), otu mbara igwe dị egwu n'ụwa.na ụwa bụ ebe obibi maka otu nnukwu usoro iyi mmiri na Rapids nke na-adọta ọtụtụ puku ndị njem kwa afọ. Ihe bụ ihe ọzọ, Ogige Ntụrụndụ Iguazú dị ka oke ala dị n'etiti Brazil na Argentina, yabụ enwere ike ileta ya site na mba abụọ ọ bụla.
Ugbu a, olee mba na-enye ahụmịhe kachasị mma na Ogige Ntụrụndụ Iguazú? Eleghị anya ndị njem a niile chọrọ ịjụ nnukwu amaokwu Iguazu Falls na-ajụ ajụjụ a.
4 Ọnụahịa tiketi
5 Uzo esi aga Iguazu Falls
Ndị njem nleta na-abịa Foz do Iguaçu bụ ebumnuche mbụ iji mara Iguazu Falls. Agbanyeghị, obodo a nwere ebe nkiri ndị njem ndị ọzọ ọ bụ ezie na ọ nweghị onye ga-eji ya tụnyere ha.
Akụkụ ndị Brazil nwere naanị 20% mmiri mmiri na National Park niile. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80% fọdụrụ na mpaghara Argentine, mana eziokwu a anaghị emebi ihe mmara nke Iguazú si Brazil, ebe ọ bụ Ọ dị n'akụkụ Rio de Janeiro ebe ị nwere ike iji anya nke uche gị hụ ọmarịcha ngosi a nke okike mgbe ị na-eche ihu iyi mmiri.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, igbe nsọpụrụ ịhụ Iguazu Falls dị na Brazil. N'ebe a, ị nwere ike iwe foto ndị ahụ mara mma iji gosi ndị enyi na ezinụlọ gị. Usoro okirikiri nke na-enye ohere nleba anya dị ihe dịka mita 1.200, yana ịrịgo na ịrị elu nke na-akpọ onye ọbịa ka ọ gaa ebe niile ka ọ ghara ịlafu ihe ọ bụla. Na ngwụsị njem ahụ, ị ​​nwere ike ịghọta oke mmiri na ike ya niile mgbe ị dabara na akpịrị Ekwensu mara ama.
Na nchịkọta, site na Brazil ị nwere mmasị na Iguazu Falls na ịma mma ya niile dị ka a ga - asị na ị na - eche kaadi akwụkwọ ozi na echiche sitere na paseeji na - esote akpịrị Ekwensu dị mma. Na mgbakwunye, site n'akụkụ ndị Brazil enwere ike ịnụ ụtọ ịdị ebube nke nsụda mmiri ahụ site na igwe mbuli nwere windo iko.
Site na akụkụ Argentina, ịnwere ike ịnweta Iguazú Natural Park site na obodo Puerto Iguazú, nke dị njikere maka njem nleta karịa Foz do Iguaçu.
Dị ka m kwuru na mbụ, Echiche kachasị mma nke Iguazú Falls sitere na Brazil mana ndị Argentina nwere 80% nke mmiri mmiri ma nwee ike chee na n'akụkụ ha ọdịda ahụghị ahụ kama kama ọ nwere mmetụta, ebe ọ bụ na site n'akụkụ Argentine ị ga-ahụ ka ha daa n'akụkụ gị. Mmiri mmiri ahụ dị nso ma ị nwere ike ịnụ ụda nke mmiri na-adaba na ihe efu na ike ọ na-eme.
N'ebe ndị Argentine na-eme njem nleta ahụ ga-ahụkwa okirikiri nke njem osisi nke na-eduga ịhụ Iguazú Falls site n'elu, site n'okpuru na ọbụna ịgafe Iguazú Osimiri iji tụgharịa uche n'ụzọ panoramic nke Nnukwu Ekwensu nke dị n'akụkụ Brazil. E nwere obere ụgbọ oloko na-eme njem a mana ahụmịhe dị ike karị ma ọ bụrụ na ịga ụkwụ.
Na nkenke, si Argentina ị na-eche ike ọdịda mgbe ị na-eje ije n'akụkụ ha. Also gafere osimiri ahụ ma ị nwere ike ịhụ anụmanụ dị iche iche dị ka coatis.
Kedu akụkụ ka Iguazu Falls si hụ nke ọma? Ajụjụ a nwere azịza siri ike. Ọ dabere na ihe anyị na-achọ mgbe anyị rutere n’ogige ntụrụndụ Iguazú: ọ bụrụ na anyị chọrọ ịtụle ọdịda na ụzọ panoramic dị ka mpempe akwụkwọ ozi, nke kachasị mma bụ Brazil. Ugbu a, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịma jijiji n'akụkụ ọdịda, nke kacha mma bụ Argentina.
N'ebe a, Ekwesiri ighota na ibi ndu zuru oke na Iguazu Falls, ihe kacha adaba bu iga akuku abuo ma rie uru ndi obodo obula nwere. Akụkụ abụọ ahụ na-akwado ibe ha ma ọ bụ ndị njem ga-enweta ụgwọ ọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na ị kpebiri ịga leta Iguazu Falls si n'ebe abụọ ahụ ma n'otu ụbọchị ahụ, ihe kachasị mma bụ ịmalite n'akụkụ Brazil ebe ọ bụ na nleta ahụ ga-ewe naanị awa abụọ ma nye gị ohere itinyekwu oge na mpaghara Argentina nke ga-ewe anyị awa anọ.
Puerto Iguazú: Argentine n'akụkụ 170 pesos kwa onye (20 usd, 17 €)
Foz do Iguaçu: Brazil n'akụkụ 50 Reais kwa onye (25 usd, 20 €)
Uzo esi aga Iguazu Falls
Site na Foz de Iguaçu: Enwere ụgbọ ala ọha na eze na-eburu gị, ọ na-ahapụ ọkara ọkara ọ bụla ma na-efu ihe dị ka 4 reais, ya bụ, € 1.5 ma ọ bụ 2 usd. Ọ na-ewe ihe dịka ọkara elekere iji ruo ebe ahụ ma ọ bụ nkwụsị ikpeazụ ya mere ọ dị mfe.
Site na Puerto Iguazú: usesgbọ ala na-ahapụ minit 30 ọ bụla gaa ogige ahụ, nke dị ihe dị ka nkeji 40; ego dị ihe dị ka pesos 15 Argentine.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Argentina » Ebee ka a hụrụ Iguazu Falls kacha mma: na Brazil ma ọ bụ Argentina?